I-35 YOKUDALA IMINYAKA EMI-5 YEZIPHO ZEZIPHO ZE-2021-I-KNOT - IZIPHO
Eyona Izipho Esona sipho siGqibeleleyo seminyaka emi-5 soMlingane wakho okanye isiThandwa esiThandwayo
Esona sipho siGqibeleleyo seminyaka emi-5 soMlingane wakho okanye isiThandwa esiThandwayo
Ngaba ujonge esona sipho sigqibeleleyo sesihlanu somtshato? Fumanisa ukuba zeziphi izipho zemveli kunye nezala maxesha, emva koko ujonge ezona zikhetho zethu ziphezulu. Yakobchuk Viacheslav / Shutterstock
UNaimim ubhala amanqaku e -Knot yeHlabathi liphela, egxila kwimarike enokuthengwa evela kwizikhokelo zesipho ukuya kwifashoni yomtshato.
Ngaphambi kokusebenza kumxholo wokuhlela, uNaimim wabhala iinkcazo zangaphambili zevenkile zabanye abathengisi bomtshato abaninzi beKnot Worldwide.
Ukuhlaziywa kuka-Mar 04, 2021 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Iminyaka emihlanu yomtshato yimpumelelo engummangaliso, kwaye lowo unelungelo lesipho seminyaka emihlanu sokukhumbula isikhumbuzo. Ukukhangela izimvo? Zininzi iindlela zokwenza ukukhumbula isiganeko esikhethekileyo . Abanye abatshatileyo babhiyozela ngokucwangcisa ipati kunye nabakufutshane nabathandekayo, ngelixa abanye bekhetha into encinci eyimfihlo (cinga: isidlo sangokuhlwa kwindawo yokutyela entle okanye ikhefu lothando lweempelaveki). Ngaphandle kokubhiyozela, ukuthenga isipho esicingisisiweyo kwiqabane lakho okanye isibini esonwabileyo sisenzo esihle esiza kubabonisa ukuba bathetha ntoni kuwe. Oko kwathiwa, ukufumana isipho esifanelekileyo akusoloko kulula. Ukukunceda uphume, sidwelise zonke izimvo zesipho sokukhumbula isikhumbuzo sesihlanu apha-thatha into oyikhethileyo! Kodwa ngaphambi kokuba ungene ngesiquphe uyokuthenga, xubha kulwazi lwakho lwe izipho zemveli nezangoku kwesi siganeko sibalulekileyo, sikwabizwa ngokuba sisikhumbuzo somthi.
Sisiphi isipho seminyaka emihlanu sesikhumbuzo?
Isipho seminyaka emihlanu sokukhumbula iminyaka ngumthi, uphawu lweengcambu ezomeleleyo kunye nobudlelwane obuhlala buhleli. Zininzi izipho ezipholileyo ezenziwe ngomthi wendalo, kodwa ukuba ayisiyonto yabo, ungakhathazeki. Zama ukuguqukela kwisipho sanamhlanje sokukhumbula iminyaka emihlanu, esisilivere. (Kwaye usithembe, oko kuhamba ngaphaya kweefolokhwe kunye neemela.
Ukuba awuthengiswanga kwenye yezo zimvo, zive ukhululekile ukuthatha iphefumlelwe kwilitye lesiko, umbala okanye intyatyambo ehambelana neminyaka emihlanu yomtshato endaweni yoko. Ilitye lesikhumbuzo lesithandathu yisafire, uphawu lobulumko kunye nokunyaniseka. Xa kuziwa kwimibala, zintathu ezi zinto zibalulekileyo- eziluhlaza okwesibhakabhaka, ezipinki okanye eziluhlaza-ezikunika amathuba amaninzi okufumana isipho esimibalabala nesophawu. Okokugqibela, intyatyambo yesikhumbuzo sesihlanu yimbali entle.
Ewe kunjalo, awunyanzelekanga ukuba uhambe nayo nayiphi na imixholo yesiqhelo okanye yanamhlanje ukuba awufuni. Sifake uninzi lweembono ezizezinye ezantsi kuluhlu lwethu oluya kusebenza kakhulu kuye nabani na.
Izipho zeMinyaka emihlanu yokuZalwa
Isilivere yeZipho zeminyaka emihlanu yokuZalwa
Ezinye iZipho zemiNyaka emihlanu yokuZalwa
Iingcamango zeZipho zeWoodni
Kuqala, iinkuni zisenokungabonakali njengezona zithandwayo kwezona zibalulekileyo. Kodwa thabatha ilizwi lethu, kukho ezinye iindlela ezimangalisayo ngaphandle-ufuna nje ukucinga ngaphandle kwebhokisi kancinci. Ngethamsanqa kuwe, sineengcali ezipheleleyo. Ngaba ukulungele ukujonga ezinye zeembono zesipho seminyaka yesihlanu esizithandayo? Sinento yomntu wonke, ukusuka kwizinto ezintle ezenziwe ngezandla ukuya kwiimvakalelo zokugcina iimvakalelo.
Imidlalo yezibini ukudlala ekhaya kunye zikwimfuno ephezulu ngoku, kwaye ngelixa uninzi lwezinto ezinokuzonwabisa onokukhetha kuzo, le iyayithatha ikhekhe. Ezenzelwe wena ngamagama abo, umhla womtshato kunye neentliziyo ezininzi ezithandekayo, umdlalo weplanga ophindwe kabini kumdlalo ophindwe kabini njengendawo yokugcina izinto ezinentsingiselo.
UKasey noJustin Pearson Iintliziyo ezenzelwe wena umdlalo uphela, $ 85, UncommonGoods.com
Ikrolwe ikwimo yentliziyo kwaye yenziwa ngomthi, le pendant ye-chic iphindwe kabini. Ngubani owaziyo ukuba izipho zeminyaka yokukhumbula iinkuni zinokunxiba kangaka? (Ingcebiso: Cela ukusongelwa kwesipho ngaphandle kwentlawulo ke ngoko ukulungele ukuyihambisa kwangoko.)
Liel kunye neLentz Intsimbi yomqala yesipho seminyaka yesihlanu, $ 87, Etsy.com
Asinakubhala ukujikeleza izipho zethu zomthi esizithandayo kwisikhumbuzo seminyaka emihlanu ngaphandle kokubandakanya Ingqolowa yoqobo jonga. Yenziwe kwimiphanda ye-bourbon efunyenweyo, bubungqina obuhle beli nqanaba libalulekileyo.
Ingqolowa yoqobo Umgqomo wama-42mm kwiWhisky Espresso, $ 299, OriginalGrain.com
Xa kuziwa kwiminyaka emihlanu yokukhumbula izipho ezenziwe ngomthi, oku kunokuba yinto enomdla kakhulu. Uninzi lwabantu abatshatileyo babambelela kwiimemo zabo zomtshato emva kosuku olukhulu, kodwa njengoko ixesha liqhubeka, umngcipheko wokulahleka okanye ukonakala uyakhula. Izinto zabo zokubhala ezixabisekileyo ziphinde zenziwa kwimephu ebabazekayo okanye kumnatha wesikhumbuzo esingapheliyo abanokusixabisa ubomi babo bonke.
UMelyssa, Michele noChristine Kirn isimemo somtshato esenzelwe wena, i- $ 130, UncommonGoods.com
Iintyatyambo ezintsha zilungile, kodwa kuthekani ukuba besinokuxelela ukuba iqabane lakho linokuba neentyatyambo eziya kuhlala ngonaphakade? Esi siqhamo sinyuswe ngamatye siyinyani kwaye senziwe kakuhle ngesandla.
IiAdamz zoqobo iirhasi zomthi, i $ 99 ngeseti ye 6, Etsy.com
Izibini ezithandayo ukupheka zihlala zifuna iibhodi ezintsha zokusika-kwaye siyabheja azinayo inamagama aqoshwe phezulu. Le iphinda iphindwe kabini njengebhodi yokubonisa yokugqibela, ilungele amaqela. Sisipho seminyaka emihlanu somtshato esikhethekileyo abaya kuthi basifumane.
UKim Strassner kunye noMike Pararas ibhodi yokusika eyenziwe ngumntu, ukusuka kwi- $ 159, UncommonGoods.com
Nokuba uyokubhiyozela okanye uhlala ekhaya, ukunxiba yindlela elula yokwenza umsitho uzive ukhetheke ngakumbi. Ukuchukumisa okugqibeleleyo kwisuti yeqabane lakho? Isibini sekhofu enqabileyo enamakhonkco enziwe nonyaka obophe ngawo iqhina.
Uthando lwePhepha ii-cufflinks zomthi ezenziwe ngabantu, ezivela kwi- $ 89, Etsy.com
Oku Ivenkile ye-Etsy Ikuvumela ukuba urekhode umyalezo omnandi-isiqhulo sangasese, umgca osuka kwingoma oyithandayo yesiqingatha sakho okanye ngokulula, 'Ndiyakuthanda-kwaye ube nesandi esikhethekileyo somthi esixhonywe kwi-birchwood. Ngalo lonke ixesha i-S. uyabona baya kukhunjuzwa ukuba ubathanda kangakanani.
Iphepha loBugcisa lobuGcisa ubugcisa bezandi zomthi, ukusuka kwi- $ 35, Etsy.com
Ngobugcisa benziwe ngamagcisa eKenya ngomthi ococekileyo wokuziphatha kunye nobhedu olwenziwe ngokutsha, le bracelet yesachic sisipho esihle sesinye isiqingatha sakho esingaphantsi. Isimbo esingaqhelekanga se-teak sinika isiqwenga ngasinye iqhekeza elikhethekileyo, ngelixa uyilo lwenqanawa yakudala igcina ubuncinci.
KWI-MARKET I-teak Sabi icacisa isongo cuff, $ 98, Ivenkile ye-SOKO.com
Ikhola yeenkuni ihlala ibhalwe igama lomtshato wakho zezona ndlela zilungileyo ze-S.O yakho. ukuphatha isiqwenga sakho xa usiya naphi na. Umlingane wakho uya kuncuma ngalo lonke ixesha becinga ngesikhumbuzo esimnandi esifihlwe ngaphakathi kwehempe yakhe. (Kwaye ayichazwanga indlela abaza kujonga ngayo!)
UMaria Allen Boutique ikhola eyenzelwe wena ihlala isipho seminyaka emihlanu kuye, $ 38, Etsy.com
Yintoni enokuba nentsingiselo ngakumbi kuneseti yee-coasters ezibambe amehlo ezikrolwe kwigridi yesixeko iqabane lakho likhule okanye laya ekholejini? Ezi coasters zizipho ezintle zokukhunjulwa komthi kuye okanye yena, ngakumbi ukuba bafudukile kwidolophu yabo ukuba babe nawe.
UMary Dawson Iiprosesa zemephu ezingabamelwane, $ 36 iseti ye4, UncommonGoods.com
Le bhanti yebhanti yamaplanga yongeza ukubamba i-rustic kuyo nayiphi na indibano. Kodwa eyona nto ibalulekileyo? Unokongeza nayiphi na into oyithandayo ukuyenza ibe yeyakho-umyalezo, ii-initials zabo okanye ulungelelwaniso lwendawo ohlangane nayo kuqala. Iya kuba yeyona nto ibaluleke kakhulu kwiqabane lakho.
Ukuhamba kunye namaza ibhanti yomthi ibhanti, ukusuka $ 44, Etsy.com
Iingcamango zesipho seSilverware
Ukuba ufuna ukuhambisa into encinci ecwebezelayo kunemithi yesiqhelo, cinga ngokuhlonipha unyaka wesihlanu womtshato ngesilivere. Elona candelo lililo? Akunyanzelekanga ukuba wophule i-bhanki ukuze ubonise umntu omthandayo (okanye) ngesidlo sakusasa esitsha. Akukho mthetho unzima wokuba isipho sakho kufanele ukuba senziwe ngesilivere (okanye senzelwe itafile yokutya). Endaweni yoko, khetha ezinye izitya zekhofi ezingenazintsimbi okanye iseti yezixhobo zokupheka zebarbee. Ungoyiki ukubeka owakho ujikelezo lwezinto-konke kuya kuxhomekeke kulowo umamkelayo enokukhetha.
UJenny Huan, wena Mecham
Le yeyabahleli beendlela. Ezi ziqwenga ezipinki ziya kongeza indawo ekuchukumiseka kuyo nayiphi na itafile. Yenziwe ngentsimbi engenasiphelo, kufuneka igcine ukukhanya kwayo kwiminyaka ezayo. Qinisekisa ukuba ufumana iiseti ezimbini.
Uboleke iBlu I-Luna flatware kwi-Brushed Rose Gold, i- $ 89 yeseti ye-5, Ukutya52.com
Ukuba esinye isiqingatha sakho sisoloko sifikelela kwisitya sebhotolo yamandongomane, nantsi isipho seminyaka emihlanu sokumkhumbula. Nganye yezi ndlela zokuvuna zesitayile sokuvuna isitampu ngombala omnandi ngathi 'siyibhotile kunye' kwaye 'uyi-PB kuJ.' Intle kanjani!
Indlela yeWoodsy Isitshixo sebhotela sevini esenziwe ngesandla, $ 19 inye, Etsy.com
I-Flatware ayifumaneki ngakumbi ngakumbi kuneli qokelelo langoku liphefumlelwe ziidayimani ezisikiweyo. Siphathe esi sibini ngokugqibezela ukusika ngokubanika iseti yama-20 equlathe iifolokhwe ezine zangokuhlwa, iifolokhwe zesaladi, amacephe esuphu, iitispuni kunye neemela. Ikhenkce kwikhekhe? Zenziwe nge-dishwasher-ekhuselekileyo yentsimbi engenasici yokucoceka ngokulula kunye nokuqina okungaphezulu.
yomelele I-Dragonfly black flatware set, $ 210 iseti yama-20, SurlaTable.com
Ukuthengela umntu owenza intsingiselo ibhodi yesonka samasi ? Iseti yeemela zamasi ezimbejembeje ezenziwe ngentsimbi engenasici kunye nesilivere ethandekayo yicwecwe lamaphupha abo. Inye kuphela into ekufuneka uyigcinile engqondweni: Unokufuna ukubagcina ngaphandle kwesitya sokuhlambela.
UWallace Abakhandi besilivere I-Grand Baroque yesiqwenga seeshizi esisi-3, $ 380, NeimanMarcus.com
Siyabheja ukuba ubungalindelanga ukufumana ubucwebe kuluhlu lwethu lwezipho ezinesilivere! Yenziwe kwi-anti-style antique-style, i-necklace nganye inokwenziwa ngokwezifiso kunye nebhedi enemibala.
Spoon Me Maryland ubucwebe besilivere, $ 22, Etsy.com
Olu seto lokwenza mesmerizing luya kuzisa i-whimsical-yet-stylish touch kwitafile yesidlo sangokuhlwa. Sisipho esahlukileyo somtshato wesihlanu esenzelwe esi sibini sinezinto ezininzi zokuhombisa ekhaya. Ibhonasi: Imibala eluhlaza okwesibhakabhaka kunye neblue yenza ukuba le mibala yemveli ibonakale.
UMepra Indawo yokuseta indawo yesiqwenga 5, $ 217, Imvu.com
Le yeyabathandi bekofu! Ukuphucula isiko labo lemihla ngemihla lecaffeine ngale seti yeepuni zensimbi ezingenazintsimbi zityinwe ngesandla ngamabinzana amnandi afana 'nokuphakama nokuguba' kunye 'nothando olupheleleyo lwe-latte.'
Intengiso yeHlabathi Izipuni zekofu ezityinwe ngesandla, i-17 yeedola iseti ye-4, WorldMarket.com
Isikhumbuzo sonyaka wesihlanu ngokungathandabuzekiyo sikhulu. Ukuba ujonge ngokwenene Chukumisa isibini ngento enesilivere-ephefumlelweyo, ube netreyi entle yokukhonza eyenzelwe wena igama losapho okanye i-monogram. Le sewareware intle yenziwe nge-aluminium ehlaziyiweyo, efikelelekayo kancinci kunesilivere (kodwa njengokukhanya).
Ibhabhathane Umtya weParele oyitray oyile, $ 90, UkwenziwaMall.com
Ukuba esinye isiqingatha sakho sikhetha ukupheka ngaphandle, yilahle i-flatware yesiko yeseti yeebhaskithi zentsimbi ezingenagwele. Ezi seti zintandathu zibandakanya ifolokhwe yenyama, ibrashi yokugcoba, imela ye-barbecue, i-slotted turner, i-tongs kunye necala lokugcina elifanelekileyo nelomeleleyo. Unokucwangcisa nokuba usonwabele isikhumbuzi se-barbeque ukubhiyozela!
BergHOFF I-Cubo 6-isiqwenga sensimbi ye-BBQ yesixhobo esingenatyala, $ 90, SurlaTable.com
Ukukhangela eminye iminyaka emihlanuizimvo zesikhumbuzo? Ukuba u-S. Ungumntu othanda ukutya kwaseAsia, alungiselele isitya abasithandayo ekhaya besebenza ecaleni kweseti yezinti zokutya. Isibini ngasinye sinokukrolwa ngamagama akho, umhla wabatshati bakho okanye omnye umyalezo onentsingiselo. Elona candelo lililo? Zenziwe ngesilivere kunye ne-ebony, ukuhlonipha zombini izipho zala maxesha kunye nezesiko ngeli nqanaba.
Ivenkile yeWood Izinti zesilivere zesiko, ukusuka kwi- $ 48 kwisibini, Etsy.com
Olunye uluvo lweMinyaka emihlanu yoKhumbula iZipho
Iminyaka emihlanu sitshatile sisiganeko esikhethekileyo, kwaye oko kuthetha ukubhiyozela ngento ethile yazi bayakonwabela. Ukuba izipho zemveli nezangoku azikhathazi zonke iibhokisi, zilungile. Sinezinto ezininzi ezinengcinga zesipho esiya kusebenza kulo naliphi na iqabane okanye isibini. Qhubeka ufunda ukuze ufumane ukukhethwa kwethu okuphezulu.
Kulungile, le ngokoqobo ithatha ikeyiki. Zinezinto ezine ezomileyo zesiponge setshokholethi esimnandi kunye netshokholethi yetshizi ebandayo, egqitywe kakuhle ngebhotoloyitha ebomvu ebomvu ngohlobo lwamagqabi e-rose. Ukuba ayonelanga ukukucenga, ivela Sithatha ikhekhe —Yintandokazi phakathi kosaziwayo kunye nabaphangi abonwabileyo ngokufanayo.
Sithatha ikhekhe ikhekhe ebomvu yetshokholethi ebomvu, $ 79, Goldbelly.com
Esinye isikhumbuzo seminyaka emihlanu sesipho? Ubucwebe-ngokukodwa iisafire. Yenza i-SO yakho uzive ngathi ubukhosi obunomsesane obonisa Ilitye lokuzibandakanya kukaDuchess Kate . Ukuba ukhetha ibhendi enesafire efana nale, iya kujongeka intle ecaleni komtshato wabo kunye namakhonkco okuzibandakanya.
UMlambo iNayile isafire kunye nedayimane yokufaka iringi, $ 625, BlueNile.com
Yeyiphi indlela ebhetele yokubhiyozela inyathelo elitsha kunokujonga emva kwiinkumbulo zakho ozithandayo? Landela ukukhuthazwa kolu shicilelo lobugcisa bokuthandana, okanye faka ifoto yosuku lwakho lomtshato kunye neminyaka emine edlulileyo-nokuba yeyiphi na, isakhelo somfanekiso ogqityiweyo siya kubanika zonke iimvakalelo.
Ngaba i-cubic zirconia isike iglasi
Liz conley Ixesha lobugcisa besithombe, ukusuka kwi- $ 24, IMinted.com
IL Rocky Luten
Ukuba iqabane lakho linomdla ngakumbi kwizixhobo ezipholileyo kunokugcina, sebenzisa oko njengokuphefumlelwa! Sithathekile yile mingxunya yomlilo incinci, kwaye ukuba i-S. ukhe waphupha ukosa i-marshmallows esofeni, baya kuba njalo.
Umlilo weFLIKR indawo yomlilo yekhonkrithi, i- $ 95, Ukutya52.com
Nalu olunye uncedo olumnandi oluhambelana nomxholo wesikhumbuzo seminyaka emihlanu sesafire. Amatye anqabileyo aqaqambileyo ongezelelweyo adibanisa imibala eyahlukileyo kule ndandatho yomnye omncinci. Khetha phakathi kwesilivere, igolide emhlophe okanye igolide etyheli yebhanti ngokuxhomekeke kwisitayile seqabane lakho.
UDavid Yurman Isangqa sebhendi yokuhombisa ngeesafire, ukusuka kwi- $ 1,400, UDavidYurman.com
Nokuba sele benayo okanye hayi IfowuniSoap , nasiphi na isibini sinokuvuya xa singamkela i-HomeSoap kwindawo yokuhlala. Le modeli inkulu kwaye ingcono inawo onke amandla okubulala iintsholongwane kwifowuniSoap enegumbi lezinto ezingaphezulu (cinga: iithoyi zabantwana, iitafile, abalawuli bezemidlalo nokunye). Ukukhanya okucacileyo kwe-UV-C kubulala iintsholongwane ngaphandle kokonakalisa itekhnoloji, ubucwebe okanye nantoni na efana nesepha namanzi.
Njengoko besitshilo ngaphambilana, intyatyambo enxulunyaniswa nesi siganeko sikhethekileyo yingqombela. Isimboli sokunyaniseka, ezi ntyatyambo zintle zinesakhiwo esimangazayo. Isilwanyana ngasinye esifikelela embindini sibonisa amava kunye ne-SO yakho. kwabelwene kwaye kusafanele kwabelwane. Unoko engqondweni, le yomqala wegolide intle yindlela entle yokubhiyozela iinkumbulo zangaphambili kunye ne-toast yezinto eziseza kuza. (I-Psst, kukho isibini se amacici afanayo , ukuba sisitayile seqabane lakho.)
Gorjana Isacholo somqala, $ 55, Gorjana.com
Ngelixa izipho zamava ezinje ngekhefu lasehotele kunye iifoto kungafuneka ukuba sibekwe kwisitovu esingasemva okwangoku, sinenye into epholileyo abanokuyonwabela ekhaya: a Ubhaliso lwe-MasterClass. Iya kubanika ukufikelela kuwo wonke amava amatsha, ukusuka kwiiklasi zokufota ukuya kwizifundo zokukhumbula. Kukho into eyenzelwe wonke umntu, nokuba uyokuthenga isipho seminyaka emihlanu yomfazi wakho, umyeni okanye isibini.
MasterClass ukubhaliswa kwesipho, $ 180 ngonyaka, MasterClass.com
Iiroses ngohlobo lwekhekhe lupholile (kwaye lumnandi!) Umbono, kodwa ukuba ufuna ukuba isipho sakho sihlale, ukubheja kwakho okuhle kukuhamba neentyatyambo ezigciniweyo. Thumela isithandwa sakho ibhokisi yesipho ye-faux ezaliswe zizimbali ezibomvu ezivele emva kokuvula isimanga sothando abangasokuze basilibale. Ukuba u-S. ingaphantsi kancinci, ungabathumela rose enye igcinwe endaweni yoko.
Imvelaphi yegama lokuqala Rosepops Umgcini ngeDazeni, ukusuka kwi- $ 160, Rosepops.com
Ukufikelela kwewayini ngeFacebook
Ngokuqinisekileyo, a Ibhotile yewayini sisipho esikhulu, kodwa ukuba ngokwenene ufuna ukushiya umbono, zama ukubanika umrhumo endaweni yoko. Ukuba uthengela esinye isiqingatha sakho, kutheni ungacwangcisi ukunambitha iwayini ngendlela ekhethekileyo ngosuku lwakho olukhethekileyo lokubhiyozela? Emva koko, unokuphinda usebenzise amava rhoqo kwiinyanga ezimbalwa xa unikezelo lwakho olulandelayo lufika. Khetha phakathi kokukhethwa kweebhotile ezintandathu zeklasikhi kunye nentsha, okanye iseti yeewayini ezibomvu zodidi ezimbini.
Ukufikelela kwiwayini Ubulungu beQela leWayini, ukusuka kwi- $ 150 ngenqanawa, Waini.com
Ukuzama ukubonisa IBridgerton fan? Ikhandlela lesikhumbuzo esibalulekileyo liza kubazisa ukuba ubatshise kangakanani. Eli khandlela lahlukile liza ngentando yamagama akho, umhla onentsingiselo kunye nendawo ekhethekileyo. Unokunika nodolo kulo nyaka udibene nawo okanye ubophe iqhina kwisiciko, esifundeka 'sivutha ngokuqaqambileyo okoko ...'
USandrine Froehle Ikhandlela lokukhumbula iminyaka, i- $ 45, UncommonGoods.com
Ngaba ujonge izipho zeminyaka emihlanu yomzuzu wokugqibela? Hlola kunye neentyatyambo zakho zendawo ukuze ubone ukuba bangenza ntoni. Ngenye indlela, Isixeko unikezela ngosuku olulandelayo ukuhanjiswa kweentyatyambo ukusuka ngoLwesibini ukuya ngoMgqibelo. Khetha kuluhlu lwee bouquets ezintle ezinje ngeli qela lothando lweeroses ezipinki. I-vase yentsimbi engenasici ifakiwe, ke iqabane lakho lingayibeka kwangoko. Zive ukhululekile ukukhetha ezinye ii-add-ons ezintle njenge-champagne gummy bears okanye iitshokholethi.
Isixeko I-bouquet ye-Enchantment nge-vase, i- $ 175, Imigca
Ngamanye amaxesha, izipho ezingaqhelekanga zomtshato wesihlanu zezona zibalaseleyo. I-oveni ephekiweyo eyenziwe ngeplanga ye-pizza inika ubuqili obuqhekekileyo kwizinto zemveli zonyaka, kwaye iyakwenza ucwangciso lokubhiyozela ngaphandle kube lula. Ngubani ongafuni ukuba nepati?
Ooni I-Fyra ephathekayo ephekiweyo ye-pizza ye-pizza, ukusuka kwi- $ 299, TheGrommet.com
idayimane kunye neeperile zokubandakanya
Ubunzulu bokomisa iwasher
amakhonkco omtshato afanayo omtshakazi nomyeni
ishawa encinci encinci
Ixesha lexesha lokufumana umtshato
iikhabhathi ezimnyama zokubala ezimhlophe